कुल मेमोरी। डेभिड बालडाकीले एक नयाँ श्रृंखला शुरू गर्दछ। | वर्तमान साहित्य
कुल मेमोरी। डेभिड बालडाकीले एक नयाँ श्रृंखला शुरू गर्दछ।
डेभिड बाल्ड्यासी मा एक नयाँ चरित्र सिर्जना गर्दछ कुल मेमोरी.
धेरै पहिले मैले कुरा गरिरहेको थिएँ डेविड बाल्डडैक र दोस्रो उपन्यास एजेन्ट जोन पुलरको बारेमा उनको त्रयी बाट। लगभग एकै समयमा यो नयाँ शीर्षक प्रकाशित भयो, कुल मेमोरी, जसबाट अमेरिकी लेखक सुरु हुन्छ अर्को श्रृंखला जसले आश्वासन दिन्छ। शैली को महान र धेरै प्रशंसक को लागी, आफ्नो विचारहरु र प्लटहरु अक्षनीय देखिन्छ।
El नायक कि उहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ सुपर एजेन्ट पुलर भन्दा लगभग भिन्न छ, लगभग एक सुपर हीरो को एक प्रोटोटाइप। उसको जवानीमा, आमोस डेकर धेरै गम्भीर चोटपटक लाग्छ। त्यस पछि यो बन्ने छ हाइपरथाइमेसिक र पक्कै पनि अब यो उस्तै हुनेछैन। तर तपाईसँग छ सबैभन्दा खराब त्रासदी। फेरि त्यो कथा यो लामो सास पढ्छ.
1 यसको बारेमा के हो?
3 किन यो पढ्न
यसको बारेमा के हो?
आमोस डेकर एक पेशेवर फुटबल खेलाडी बन्न आफ्नो गृहनगर, बर्लिंगटनका एक मात्र युवा मानिस थिए। तर उनको क्यारियर यो शुरू हुनुभन्दा अघि समाप्त भयो। A टाउकोमा हिंसात्मक प्रहार एक प्रतिद्वन्द्वी को विरुद्ध उसको लगभग मृत छोडियो र सधैंको लागि खेलबाट हटाउनु भयो। तर यसले केही खास परिणामहरू पनि छोडे: द हाइपरथिमिया (केहि बिर्सन सक्दैन) र सिनेस्थेसिया (र in्गमा हेर्नुहोस्)।
बीस बर्ष पछि, उसले कष्ट भोग्छ एक ठूलो त्रासदी। यो हो पुलिस निरीक्षक र जब ऊ एक रात घर फर्कन्छ उसले भेट्टायो हत्या गरियो उसको बुहारी, उनकी श्रीमती र छोरी। आघात यति ठूलो छ कि डेकरले पुलिस छोड्छ, गहिरो उदासिनतामा पस्छ र उसको घर सहित सबै थोक हराउँछ। लगभग बाँच्ने बेसहारा, ऊ मुश्किलले कहिलेकाँहीको रोजगारी पाएर प्राप्त गर्दछ निजी जासूस.
तर एक बर्ष पछि, एउटा मान्छे पुलिस र आत्मसमर्पण यो अपराध को लेखक भएको स्वीकार गर्दछ। एउटै समयमा, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको एउटा नरसंहार बर्लिंगटन उच्च विद्यालयमा। डेकरको पूर्व मालिकले तपाईंलाई उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गर्दछ। डेकरले पनि आफ्नो परिवारलाई वास्तवमै के भयो भनेर पत्ता लगाउने अवसर देख्दछन्।
यो समाप्त भए पछि, यो मलाई लाग्छ आमोस डेकर उनी शृ .्खलाका एक मात्र मुख्य पात्र हुने छैनन्, तर उनी पक्कै पनि चाखलाग्दो छ। धेरै अग्लो, बुर्ली, दाह्री र धेरै बोसो। बयालीस बर्षको उमेरमा, उनी भन्छन्, उनी दस बर्ष भन्दा जेठो देखिन्छन्, उनी भन्छन्, उनले आफूले भोगेको दुःखद घटनाको हेरचाह गर्न छाडेका छन्। कहिलेकाँही तेस्रो व्यक्ति कथावाचक तपाईंको आवाजसँग मिल्दछ पहिलो व्यक्तिमा र हामीलाई उहाँसँग नजिक ल्याउँछ।
को एक संस्करण को रूप मा आफ्नो अधिग्रहण क्षमताहरु सन्तवाद सिन्ड्रोम, व्यवहार पनि असर गरेको छ र, एक तरीकाले, समानुभूति हराएको छ। ऊ लगभग बाँच्न को इच्छा हराउँछ र हामी उसलाई विचार को लागी हेर्नुहोस् आत्महत्या केही अवसरहरूमा। अर्को शब्दमा, हामी मध्ये जो घाइते पात्रहरूको लागि एक नरम दाग छ, आमोस डेकर हाम्रो अर्को हो एन्टिरो ध्यान दिन योग्य छ। ऊ चट्टानमा हिट हुन्छ, तर नाटकले छोए जस्तो कुनै राम्रो नायकले, यति धेरै विधा, छुटकारा खोज्न संघर्ष गर्नेछ। र यो पक्कै पनि तपाईं समात्नुहुन्छ।
उहाँसँग, उसको पूर्व पार्टनर, जासूस ल्यानकास्टर, लक्जरी, वफादार र बहादुर को माध्यमिक विशेषताहरु कढ़ाई। र तिनीहरू सामेल हुन्छन् बुझ्ने मालिक पाली, एक एफबीआई एजेन्ट जससँग डेकरसँग उनका प्लेस र माइनस हुनेछ, तर जससँग अन्तमा उसले एक राम्रो टोली गठन गर्दछ। Y पत्रकार जो दृश्यमा लुक्छ, डेकरको व्यक्तित्व र उसको त्रासदी र बर्लिंग्टन हाई स्कूल नरसंहार बीचको सम्बन्धमा आकर्षित।
किन यो पढ्न
किनकि बाल्डाचीलाई सफलताको फार्मूला राम्रोसँग थाहा छ र यहाँ उसले फेरि काम गर्दछ। द्रुत प्यासि and र राम्रोसँग निर्मित गियरमा उत्कृष्ट प्लट। र एक किलर मूल, जिनका सन्देशहरू डेकरमा सस्पेंस कायम राख्दछन् र आश्चर्यजनक हुन्छ जब सम्म उनीहरू सबैका बीच जडान फेला पर्दैन।
यदि मैले राख्नु पर्छ भने तर, यो त्यो हुनेछ म अझ धेरै चाहन्थें। त्यो उसलाई अन्तिम म केहि ल .्गडो हुनेछ, को भावना संग धेरै रन। तर अन्यथा, पढ्न सजिलो छ, यो उपन्यास हो धेरै रमाईलो मैले यस वर्षको मेरो मनपर्ने पात्रहरूको रूपमा आमोस डेकरलाई पहिले नै अपनाएको छु।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » कुल मेमोरी। डेभिड बालडाकीले एक नयाँ श्रृंखला शुरू गर्दछ।
स्टर्लिंग हेडेन। चिन्हित अभिनेता, नाविक र लेखक।
होरासिओ क्विरोगा द्वारा उत्तम कहानीकारको डिक्लग